SET fitsipika | Apg29
SET dia miorina amin'ny encryption, nomerika sy nomerika sonia fanamarinana (mifanaraka amin'ny tapaka sonia karatra fividianana).
SET dia mitaky ny sasany nametraka rindrambaiko ao amin'ny solosaina. Rehefa feno ny mpividy ny harona fiantsenana nomerika sy mifidy "karama amin'ny karatra" Mila ny fifandraisana isan-karazany. Taratasy fanamarinana dia nalefa sy miverina, manana lafiny roa karama nomerika baiko omena dia nohariana sy fanaraha-maso ny banky atao. Fa avy amin'ny encryption fanalahidy izay mipoitra ao amin'ny toeram-pivarotana lehibe, ka misy antsoina hoe faka manan-danja ho an'ny mpampiasa sy ny rehetra dia miorina ao an-rindrambaiko.
SET dia tetikasa sy maneran-faneva mba handoavana tsy manana ahiahy miaraka amin'ny karatra ao amin'ny Internet. Ny tena momba ny elektronika varotra sy ny fandoavana ny faktiora. Ny tetikasa dia nanomboka tany amin'ny tapaky ny taona 90. Ny fanafohezan-teny ho an'ny Secure mijoro Electronic raharaham-barotra, izay azo antoka amin'ny teny soedoa elektronika raharaham-barotra. Ao ambadiky ny Standard dia ny famoronana orinasa lehibe toy ny Visa, MasterCard, IBM, Microsoft sy Netscape. Rehefa tonga ny tetikasa iray mpanamory nandray anjara avy any Soeda ny sasany banky lehibe sy Postal Giro.
SET dia miorina amin'ny encryption, nomerika sy nomerika sonia fanamarinana (mifanaraka amin'ny tapaka sonia karatra fividianana). Technical Data namorona antsoina hoe virtoaly ( "solon-") karatra ao anatin'izany ny fampiasana ny nomerika sy ny taratasy fanamarinana iray voaaro carte de crédit maro no nalefa. Io no banky sy mafy Verisign izay mifehy sy ny olana na karatra fanamarinana ny mpampiasa sy ny raharaham-barotra. Verisign dia subcontractor ny fampisehoana. Merchant fanamarinana hafa azo oharina amin'ny fandoavam-bola izany hajia nampiasaina fahiny, rehefa manao ny deduction ho an'ny fividianana carte de crédit.
Cyber ​​Cash nanampy hanana ny SET ary koa manana rafitra antsoina hoe SIPS toy izany koa. SET sy CyberCash dia mampiasa ny mitovy karazana encryption. Verifone iray hafa manodidina orinasa mampiasa ny SET fitsipika, ary izay izy noho ny nanaovana fitiliana. Ny SET sy mitovy rafitra, tsy afaka hamindra vola eo amin'ny isam-batan'olona, ​​toy ny firenena miezaka hisakana famotsiam-bola sy ny toy izany. Toy ny betsaka hafa cashless dia mampiasa ny SET tsy vola kely noho ny vola lany fitantanana avo.
Computers sy ny solosaina orinasa - ny tontolo ara-bola elektronika hazondamosiko
Tamin'ny '50s toy ny banky tsikelikely nanomboka nampiasa solosaina sy ny teknolojia fifandraisan-davitra ao amin'ny asa. Misy mieritreritra mihitsy aza tamin'izany andro izany teo amin'ny rafitra cashless fa nanitatra manerana ny United States izay ho mifandraika amin'ny maha iray. Izany no nanaovany ny rafitra mety ho avy ny EFTS (Electronic famindrana vola System). Fa izany nandritra ny "60 toy ny fisehoan-javatra mifandray amin'ny ordinatera nanomboka araka ny tokony. Io no banky afovoany mpitantana vurmade mahery ho an'ny solosaina ity dingana teo aloha. Ny iray i John Reed amin'ny Citibank (tatỳ aoriana mpitari-draharaha ao amin'ny birao any) izay nanao nanjary sampana iray manontolo automated.
Solosaina ity hafanam-po eo afovoany mpitantana dia tsy afa-tsy ny United States. Na dia any Espaina, niasa teo an-zavatra atao hoe COAS (Vaomieran'ny ny asan'ny fanahy sy automatique). Ny iray amin'ireo tena fitsapana voalohany tany Etazonia ny fandoavam-bola avy hatrany mifandray amin'ny karazana karatra ID natao tamin'ny 1967 tany Wilmington tarihan'i Bank of Delaware. I IBM voalohany namorona magnetremsetekniken ny resaka dia Voalaza fa "fanomezana avy amin'ny tontolon'ny IT ho an'izao tontolo izao ny banky."
Tahiry any Soeda Fampiroboroboana ny fitarihana manokana Sven G Svensson mpiaro tany am-boalohany ho an'ny solosaina ny tahiry banky. Efa tamin'ny taonjato faha-50 ny isan-taona natao tany Saltsjöbaden fihaonambe mikasika ny banky solosaina. 90 dia ny folo taona rehefa niditra aterineto ny raharaha izao tontolo izao. Companies matetika nanomboka tamin'ny zavatra hafa, fa ho lehibe farany solosaina orinasa. Ireo matetika dia avy eo natambatra ho be orinasa goavam-be.
Burroughs dia toy izany orinasa lehibe iray solosaina, miaraka amin'ny fanamafisana ny banky izao tontolo izao. Burroughs nanao anisan'izany ny SWIFT. Izany no rafitra iraisam-pirenena ho an'ny fifandraisana eo amin'ny banky. Ny orinasa tsy miankina lehibe teo aloha dia Sperry. Burroughs tale Michael Blumenthal, nahomby tamin'ny 1986 mampiray Burroughs sy Sperry ho Unisys. Blumenthal efa teo aloha ihany koa ny Minisitry ny Vola.
Manan-danja ara-tantara iray hafa orinasa ao anatin'ity lohahevitra ity, Remington Rand. Unisys raharaham-barotra efa Nizara, Inter Alia in hanohy ny asa haingam-pandeha sy mandeha mikarakara ny rafitra goavana ny fitoeran-dry RFID-miaramila ho an'ny hanamarina. RFID dia teknolojia izay kely mampita vaovao dia be mampiasa onjam-peo ny onja. Araka ny ho hitantsika, araka ny sisa amin'ny boky dia eo amin'ny RFID fifandraisana maro ho an'ny fiaraha-monina cashless. Microsoft ny rafi-miasa ampiasaina amin'ny ATM efa voalaza. Ny Linux rafitra miasa ampiasaina ihany koa amin 'izao, ny ankamaroan'ny lohamilina Internet sy solosaina rafitra lehibe kokoa ny supercomputers.
Orinasa iray hafa, ohatra, any Failandy sy Soeda mavitrika orinasa IT Tieto ankoatra ny zavatra hafa amin'ny alalan'ny carte de crédit syssIar famoahana amin'ny banky maro. Facebook dia niditra tao amin'ny orinasa fandoavam-bola ho zava-dehibe. Ny orinasa nandefa virtoaly (toa na solon-) vola tamin'ny 2011 sy ny solosaina lalao orinasa
Hung avy hatrany ary. Facebook ihany koa nikasa ny 500 tapitrisa mpampiasa dia ho afaka handoa ny carte de crédit tamin'ny alalan'ny chatappen Messenger. Mampiasa ny rindrankajy amin'ny chat dia midika fa "Lahateny amin'ny lahatsoratra." Tsy naniraka azy ireo fehezanteny eo tsikelikely (jereo ny an-telefaonina lahateny), tsy toy ny e-mail sy ny tapaka taratasy.
Facebook ihany koa ny fitaovana ho an'ny fraudsters, toy ny fananganana ny Ica lafiny -like amin'ny alalan'ny izay amin'ny tranga sasany nandroba ny olona an'arivony kronor ny voalaza fa tombony amin'ny fifaninanana. Izany dia azo atao amin'ny alalan'ny fanangonana tahirin-kevitra amin'ny banky boaty. Apple Company Manamafy orina ny banky angona lehibe ny carte de crédit tahirin-kevitra ho an'ny mpanjifa izay manana karatra. Ny orinasa solosaina Te ny fiaraha-monina dia ampahany cashless satria mifandray akaiky ny vokatra. Arakaraka cashless ny ordinatera kokoa.
Toy ny mpamaky angamba tsaina noho ny teny, dia tsy misy 20 taona, izay nanoratra ity boky ity. Niara-niasa tamin'ny ordinatera tamin'ny fomba iray hafa noho ny tena, na taona vitsivitsy. Firy taona aho, tsy nety aho, na izany aza, miresaka ny fiainana manokana noho ny antony. A tampoka subjective iaktagelse. Mety haka ny androm-piainany, ary ny soratra efa ho antsasaky ny boky alohan'ny tonga aho manerana ratsy iray fanehoan-kevitra manoloana ny cashless fiaraha-monina avy amin'ny solosaina ny lafiny orinasa. Fa izany dia mikasika ny zavatra nitranga efa ho 50 taona lasa izay. Solosaina ankehitriny izao tontolo izao no toa tsy efa ny saina sy nahita ny fomba ratsy ny cashless fiaraha-monina.
Afa-tsy ny momba ny lehilahy iray atao hoe Paul Armer avy amin'ny Rand Corporation, ary efa tamin'ny faramparan'ireo 60 ny ambony-olana manodidina amin'ny mombamomba ny fiainana manokana cashless fandoavam-bola. Niresaka momba izany ao amin'ny US Antenimieran-doholona. Mila bebe kokoa izahay toy izany ireo lehilahy sy vehivavy ao amin'ny solosaina amin'izao tontolo izao ankehitriny. Misy-dehibe teo aloha mazava ho azy banky ny olona. Fa aiza kosa izay tsikera avy amin'ny solosaina izao tontolo izao? Armer tsy nilaza na dia ny hanala ny anarany ao amin'ny rakitsoratra manao izany amin'ny lafiny sasany dia afaka mamantatra ny olona.
Ao ny asany nila Armer amin'ny fotoana, ny antontan-kevitra momba ny karama ao amin'ny solosaina orinasa. Izany no tsy dia nanao raharaham-barotra tamin'ny totohondriny karatra ho antontan-kevitra ao amin'ny toeram-pivarotana izay noheveriko voalohany fomba tsy mitonona anarana. Nizara ny angon-drakitra fotsiny ny karama, ny fanabeazana ary ny toerana lehibe nizara telo faritra. Rehefa Paul Armer Dia nandamina ny zavatra araka ny filaharany, dia afaka avy hatrany (izay tsy natao hatrany am-piandohana) mahita iza izany momba izay nanana ny karama ambony indrindra. Izany no vao nanomboka ny fanoloran-tena ho amin'ny fifanakalozan-kevitra ny fiainana manokana oharina amin'ny hoavy tsy mivadika ny tsy fahampian'ny vola, na amin'inona cashless.
Angamba ny zava-dehibe indrindra eo amin'ny fifandraisana sy ny ordinatera kontantlöshet dia izy ireo cashless antsoina hoe e-bola, afa-tsy izay voatahiry ao amin'ny karatra voaloa vola mialoha koa voatahiry amin'ny solosaina lohamilina amin'ny endrika antsoina hoe tambajotra vola. Raha mandinika ny fomba ordinatera milamin-tsaina, ka angamba izany fa tsy ho azo antoka kokoa izy mba hanampina ny mivezivezy ny hamster tranom-borona.
Ho an'ireo izay ihany no iray miahy ny solosaina dia manoro hevitra ny tsy hividy solosaina. Aza mividy solosaina satria fotsiny dia mety ho tsara ny manana indraindray. Azonao Atao ny Hiaina tsy misy. Izany dia mitovy foto-kevitra tsy hividy fiara izay saika fotsiny koa nitsangana teo amin'ny garazy. Satria manizingizina orinasa solosaina bebe kokoa amin'ny fiezahana foist anay kontantlöshet sy Big Brother mba tsy hivarotra solosaina betsaka araka izay tiany. Izany ihany koa tena mahasoa sy mahafinaritra ny zavatra atao amin'ny solosaina. Ny antony lehibe mbola hihazona ny ordinatera dia ny hanoratra ireo boky ireo. Ny solosaina dia tsara toy ny trano famakiam-boky, milina fanoratana sy ny madio kilalao.
Fa ho marin-toetra aho, ry liana maty ordinatera kely isaky ny tsirairay ary no voasoratra amin'ity boky ity. Zavatra iray no azo antoka. Raha ny fiaraha-monina cashless tanteraka eo amintsika, misy afa-tsy zavatra iray ny fahazoan-dalana mankany. Total sy ny teknolojia amin'ny ankapobeny ankivy. Tsy ny karazana zavatra izay tsy maintsy hushållsabetet hatao fa zavatra hafa rehetra izay manana fifandraisana sy ahalalan-javatra ny asa. Izany dia marina torohevitra avy amin'ny mpanoratra, izay tena tia ny teknolojia. Amin'ny teoria, dia ampy ampahany lehibe teknolojia ankivy hamono kontantlösheten. Mety tsy misy tsy misy teknolojia. Cash dia afaka mitantana tsy misy herinaratra sy ny teknolojia (afa-tsy momba ny mpanamboatra). Efa nanao izany izy ireo nandritra ny taonjato maro.
Na dia te-hanohy hampiasa ny solosaina dia toy izany no tsy midika hoe imbetsaka aho fantasized momba ny hevitra hoe fotsiny hiafara amin'ny solosaina. Nanontany tena ahoana ny fiainana ho sy hanao zavatra tsy misy. Ny fiaraha-monina sy ny fanaraha-maso mpanaramaso ny olom-pirenena bebe kokoa amin'ny alalan'ny ordinatera. Toa tsy hanam-pahataperana ny fahoriana. Noho izany ihany, dia afaka hahazo tombontsoa bebe kokoa hentitra, ary tahaka ny amin'ny mandrakariva mieritreritra ny zavatra ataonao eo amin'ny solosaina.
Mety hisy ireo izay mahita ahy ho toy ny ara-teknika reactionaries. Tsy izany mihitsy no nitranga. Izao no tena tahaka ny lehilahy ny handeha ho dinganina fotaka cashless kady. Mba hanaovana izany, dia tsy maintsy maka vitsivitsy aloha hàdiny. Koa satria azo tanteraka ny teknolojia ampiasaina noho ny zavatra tsara indray. Farany, dia mety hanatsoaka hevitra mora foana fa raha tsy misy ny famoronana ny solosaina tsy nety cashless fiaraha-monina dia tokony maoderina amin'ny teny.
Isika no mpanjifa izay mandoa vola
Ahoana hoy ny governora lefitra Lars Nyberg amin'ny lahateny ara-bakiteny eo amin'ny ara-bola Sehatra Union Kongresy in Balsta tamin'ny 2008.
"Mora amin'ny voalohany nieritreritra ny hino fa misy ny varotra sy ny banky izay tsara fanahy handoavana ny fandoavam-bola. Kanefa tsy izany tsotra. Mpivarotra mila ny vola lany nanarona, raha tsy izany tsy afaka hitarika ny raharaham-barotra. Ary toy izany koa mandeha ho an'ny banky. Noho izany, popping vidin'ny rehetra fandoavam-bola amin'ny farany ho amin'ny marika eo amin'ny entana sy ny asa izahay, hividy. ny ronono sy ny legioma dia mety ho kely kokoa lafo eo amin'ny fivarotana sy ny petra-bola tahan'ny kely hampidina any amin'ny banky noho ny nety raha tsy izany dia ho ny raharaha. dia toy izany no mpanjifa sy ny banky mpanjifa in farany mandoa ny vola lany ny vola rehetra. fa isika tsy mahita azy. Noho izany, isika izay hinoany fa izy ireo - na ny olon-kafa no mandoa. "
Ary hoy noho izany, ny olona iray ao anatin'ny Riksbank, fa indray mandeha, ny mitanjaka fahamarinana. Misy ny mpanjifa sy ny mpanjifa izay mandoa ny fandoavam-bola. Aoka isika tsy nanorisory mikasika ny fandoavam-bola vola be nandrara ny varotra sy ny banky. Ny banky izay, marihina, eo ho eo mahazo jatony dolara ny tombom-barotra madio isan-taona soedoà. Na izany aza, dia afaka miresaka momba ny "mahantra varotra" tsy mety hametraka ny takings isan'andro tao amin'ny banky. National Bank ny olona te hampiasa bebe kokoa karatra mba hanaovana azy ho Diso hevitra ilay vehivavy milaza bebe kokoa "tandrify ara-toekarena". Nyberg Te nahatakatra izany koa fa nanao lasa tanteraka ny filazana ny marina.
Nandritra ny lahateny eo amin'ny tapaky ny volana 90 ny fony Stefan Ingves no governora governora ny fanambarana, dia manaraka.
"Fa banky, ary koa ny baovao samihafa karazany, mizara tsara ny naoty sy ny vola madinika vokatry ny småvärdestransaktioner tena lafo vidy."
"Amin'ny malalaka kokoa ny heviny, dia mahafinaritra ny varotra bebe kokoa no natao elektronika satria lafo amin 'izany ankehitriny taratasy ara-fanodinana bebe kokoa azo mihena."
Ingves fanambarana voalohany dia izao no diso tanteraka. Ny mpanjifa fa tsy ny banky, amin'ny farany ka hanao varotra izay mandray ny vola lany ny vola. Ny faharoa fanambarana mifanohitra amin'ilay Riksbank ny antsoina hoe "tsy nety nanao miaramila". Izany hoe, ny mponina dia ny fitadiavana vola izay mifehy ny vahoaka. Izany ny fampirisihan'ny Riksbank kontantlösheten misokatra.
Marina fa mbola tena afaka manapa-kevitra na ny mampiasa vola na karatra. Fa raha fanasana atidoha ny olona foana ny banky, haino aman-jery, sampandraharaham-panjakana sy ny olon-kafa mba laharam-pahamehana cashless manana safidy tahaka ny heviny ao amin'ny ara-tsaina, nesorina ny ampahany lehibe tamin'ny fanapahan-kevitra. Indrisy anefa fa maro ny olona mba tsy nanorisory fotsiny, na rehefa misy tombony diso voafitaky ny vokatra. Ho an'ny maro amintsika izany fa ny handrisika ny fanoherana. Ny vola lany amin'ny karatra dia afenina ny tena maro ny banky sy ny carte de crédit orinasa. Ankoatra izany, afa-banky sy ny carte de crédit orinasa manana maso ny zavatra tena mitranga amin'ny kontantlösbrott.
Large ampahany ny orinasa mikirakira vola matetika tsy misy olo-malaza simenitra mba hampisehoana fa "mahalala" mbola fa ny fitantanana dia "tena lafo vidy". Tsy mitovy fikambanana sy ny olona mitaraina mafy fa "fikirakirana vola vidin'ny vola be." Tahaka eo amin'ny tena vola, dia isika, dia ny mpanjifa izay mandoa vola ihany koa amin'ny farany fitantanana. Business tompony ny tsy maka vola avy ao an-kitapo ihany, ohatra, karama amin'ny fikirakirana vola, Loomis. Voalohany, banky ho an'ny ankamaroan'ny saram vola amin'ny varotra, fa amin'ny farany dia ny mpanjifa no mandoa. Ankehitriny dia efa nanorina izay amin'ny farany sady mandoa vola fandoavam-bola sy ny fitantanana. Noho izany dia fotoana mba tsy hitaraindraina fananganana.
Amin'ny toe-javatra maro hafa koa voasoratra ihany fa ny fandoavam-bola ho lany vola ny raharaham-barotra. Tsy manavaka ny tena fandaniana ara-tsosialy, raharaham-barotra sy ny vola lany ny vola ny olona. Tena jadona ny miresaka momba akory va ny telo samy hafa arakaraka ny vola lany izay miandany amin'i fampielezan-kevitra. Ny zavatra tokony ampiharina foana izay farany no mandoa. Amin'ity tranga ity mpanjifa.